Chautari Daily » शिल्पाको पुर्व श्रीमान…. / भिडियो
शिल्पाको पुर्व श्रीमान…. / भिडियो
काठमाडौं / अहिले छबी शिल्पाको गसिपले नेपाली सिने नगरि निक्कै तातेको छ । उनिहरुसंग सम्बन्धित हरेक गसिप एक एक सिने बजारमा निस्किरहेका छन् । छबी संग शिल्पाले घरेलु हिंशा बिरुद्द मुद्दा दर्ता गरेसंगै उनले छबी संग डिभोर्स पनि मागेकी छिन् ।
शिल्पाले डिभोर्स मागेसंगै छबिकी जेठि श्रीमतीले बहुबिवहाँको मुद्दा हालेकी छिन् । हेमाले बहुबिवहाँको मुद्दा हालेसंगै छबी र शिल्पाको काण्डले नयाँ मोड लिएको छ । अव छबी र शिल्पा जेल जाने सम्भाबना रहेको र छबिको विवाहमा सामेल अन्य मान्छेपनी उक्त कसुरको भागीदार भई आधा कार्वाहिको भागीदार हुनु पर्ने वकिल बताउछन् ।
यता शिल्पाका पहिलो श्रीमान बारे उनकै साथीले बिगत कोट्याएका छन् । शिल्पाको पहिलो घर कसरी टुट्यो अनी शिल्पाको पहिलो श्रीमान कस्ता थिए र के गर्थे भन्ने बारे शिल्पा र बिकास बिसिका साथीले गोप्यकुराहरु सार्वजनिक गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति १२ श्रावण २०७६, आईतवार १४:४९